Fiantsonana fasan’ny Karana Mirongatra ny sinto-mahery
Mahazo vahana ny mpanendaka amin’ny faritra manodidina ny fiantsonan’ny taksibrosy miankandrefana sy ny lalam-pirenena faha-7. Maro ireo olona velon-taraina tamin’ny zoma vao maraina be teo.
Saika voafehin’ny manampahefana mantsy ireo toeram-piantsonana taksibrosy an-tsokosoko eny Anosy sy Akadimbahoaka ary Andoharanofotsy ka voatery mihazo ny Fasan’ny Karana ireo mpandeha. Mifanaretsaka ireto farany amin’izao vanim-potoanan’ny fialantsasatra sy ny fety aman-danonana izao, na vao amin’ny 3 ora maraina aza.Ny amin’ny alina indray mba afaka miala taksibrosy eny amoron-dalana ireo mpandeha fa ny fakana izany maraina no hararaotin’ireo tsy mataho-tody. Mitombo isa toy ny mpamonjy taksibrosy koa ireo mpanendaka. Matetika eo amin’ny fialana taksibe mialoha ny hidirana an’ny Fasan’ny Karana avy aty Anosizato na Ankadimbahoaka no itobian’izy ireo izay mifanosona amin’ireo mpanera. Misy koa anefa ireo miandry ankodimirana amin’ny fidirana ny fiantsonana na any anelanelan’ny fiara mpitatitra any.
Ny poketra sy ny finday no tena hazain’ireto tontakely ireto ka rehefa azony dia mitsoaka izy ireo na misy mandrahona sy manambana zava-maranitra mihitsy. Marihina fa tsy mbola nisy mpitandro filaminana teny amin’ny faritra tamin’ny fotoana nandalovan’ny mpanao gazetinay. Miandrandra ireo mpitandro filaminana ny mpandeha mba hijery akaiky ity toe-draharaha ity, indrindra amin’izao mahabe mpandeha izao.